eyes - Synonyms of eyes | Antonyms of eyes | Definition of eyes | Example of eyes | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for eyes
Top 30 analogous words or synonyms for eyes
အာဆီယံတေးသီချင်း The level of our eyes.
ကိုယ် နှုတ် စိတ် ယဉ်ကျေးခြင်း ၁၇. ပြုံးရွှင်သော မျက်နှာ Smiling face with smile eyes ကို ထားနိုင်သမျှ ထားပါ။
မျက်လုံး Compound eyes are common in arthropods, annelids, and some bivalved molluscs
မိုရီဆာကီ ဝင်း ၂၀၁၃ မတ်လ၌ PrizmaX အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆင်ဂယ် "Mysterious Eyes/Go!" ဖြင့် စီဒီခွေ ပွဲဦးထွက်လာသည်။ ဒုတိယ တေးအယ်လဘမ် "Ready" တွင်မူ မိုရီဆာကီက သီချင်း ရေးစပ်ထားသည်။
Deathcore Through the Eyes of the Dead မှ Justin Longshore နှင့် interview deathcore နှင့် ပတ်သက်၍ “ကျွန်တော်တို့ဟာ တံဆိပ်ကပ်ပြီးပါပြီ။ death metal နှင့် hardcore ရောနှောထားတာထက် ပိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဂီတမှ ရှိပါတယ်။
Country pop ထောက်ခံသူများထဲတွင် Ray Price ( For the Good Times), Charley Pride (Kiss an Angel Good Morning), Charlic Rich (three such hits), Jessie Colter( I’m Not Lisa), Crystal Gayle (Don’t It Make My Brown Eyes Blue”) နှင့် Kris Kristofferson တို့ပါဝင်ပြီး ၁၉၇၀၏ pop လွှမ်းမိုးသော Country ထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
Noise rock ၁၉၉၀အလယ်တွင် Providence မြို့သည် noise-rock တီးဝိုင်းများ၏နေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအုပ်စုများသည် သမားရိုးကျ rock သီချင်းတည်ဆောက်ပုံများ လျော့နည်းစေရန် ဂရုစိုက်လာကြသည်။ Lightning Bolt, Arab on Radar, Six Finger Satellite, Pink and Brown တို့ပါဝင်သည်။ Black Dice တီးဝိုင်းသည် ထိုဖြစ်ရပ်ထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ဘရွတ်ကလင်းသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် Gan Gang Dance ကဲ့သို့ တစ်တန်းတည်းဖြစ်အောင် ချိန်ညှိခဲ့သည်။ ထိုအုပ်စုသည် San Diego ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး အကျော်ကြားဆုံးမှ The Locust, Wolf Eyes တို့ဖြစ်သည်။
Neotraditional country အခြား neotraditional country အနုပညာရှင် skagg ၏ သူငယ်ချင်းတီးဝိုင်းအဖွဲ့သားဟောင်း Keith Whitley သည် countrypolitan တေးသီချင်းများတွင် အာရုံစိုက်ထားသည်။ သူ၏ "Don’t Close Your Eyes" ၏ အောင်မြင်မှုပြီးနောက် အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုကြောင့် ၃၄နှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ သူသေဆုံးသွားသော်လည်း Whitley ၏သီချင်းများသည် country အနုပညာရှင်များကြားထဲတွင် လွမ်းမိုးမှုကျန်ရှိသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းတွင် Emmyla၊ Harris, John Anderson နှင့် Gail Davies ကဲ့သို့ Ray Price, Webb Pierce, Carl Smith, The Louvin Brothers နှင့် Johnny & Jack တို့၏သီချင်းများ ရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Randy Travis, Geogrge Strait, Patty Loveless နှင့် The Judds တို့သည် classic country material များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပညာသည် country ဂီတထဲသို့ ရိုးရာဓလေ့ပုံစံကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
Bro-country Bro-country လှုပ်ရှားမှုကို နားထောင်သူများနှင့် ဂီတဆင်ခြင်သုံးသပ်သူများက ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ရိုးရာ country ဝါသနာရှင်များနှင့် အနုပညာရှင်များက bro-country ဂီတသည် country ဂီတသည် ညံဖျင်းသော အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ အမျိုးအစား၏နည်းပညာများကို ဝေဖန်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ရေဒီယိုဌာန KTCK (AM) မှ Corby Davidson country ဂီတ၏ပုံစံသစ်ကို ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ Greg Todd ၏ဗီဒီယိုတွင် bro-country သီချင်းများ၏ထူးခြားချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုတွင် သီချင်းခြောက်ပုဒ်ပါဝင်သည်။ Shelton ၏ Sure Be Cool If You Did၊ Bryan ၏ Drunk on You၊ Florida Geogia Line ၏ This is How We Roll၊ Cole Swindelle ၏ Chillin it နှင့် Parmalee ၏ Close Your Eyes နှင့် Chase Rice ၏ Ready Set Roll တို့ဖြစ်သည်။